Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy : Nitarika ny fankalazana teny Anosy ny vadin’ny Filoham-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaAndro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy : Nitarika ny fankalazana teny Anosy ny vadin’ny Filoham-pirenena
09/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Toa ny vehivavy maneran-tany, dia nankalaza ny andron’ny 8 martsa ihany koa ny vehivavy teto Madagasikara fa isan’ny nanamarika ny andron’ny omaly, ny “Rodobe ho an’ny vehivavy mahefa” izay notanterahina tetsy amin’ny farihin’ny Anosy, ary teo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Mponina, fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Nisy ny filaharambe notanterahina nanodidina ny farihin’ny Anosy, izay notarihin’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Voahangy, amin’ny maha reny mpiahy ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy azy , ary notronin’ireo vadin’ny filohan’ny andrim-panjakana isan’ambaratongany, ny olom-boafidy rehetra; ny solombavambahoaka sy loholona vehivavy, ny minisitra vehivavy sy ireo ramatoa vadin’ny minisitra rehetra, ary ireo mpiara-miombon’antoka, ny filohan’ny fikambanana sy filohan’ny antoko politika vehivavy. Filaharana izay nandraisan’ireo solontenan’ny faritra 22, ireo vehivavy manana fahasembanana, ireo vehivavy mpiasan’ny minisitera isan-tsokajiny, ary ireo fikambanana maro samihafa anjara, nanehoana fa olon’ny fitoniana, filaminana, firaisan-kina, ary olona fihavanana ny vehivavy.
Fotoana niarahaban’ny minisitry ny Mponina, Onitiana Realy ny vehivavy rehetra fa ihany koa fotoana nanentanana ny vehivavy rehetra mba hiray hina amin’ny fitakiana ny zony, satria mbola miaina ao anatin’ny herisetra ny ankamaroan’ny vehivavy, miaina ao anatin’ny tsy fitovian-jo izay miseho amin’ny endriny isan-karazany. “Ny 8 martsa dia manerantany, ka mitovy amin’ny vehivavy rehetra manerantany isika androany. Nisy ny diaben’ny firaisan-kina hanehoantsika fa ny vehivavy malagasy dia mahay miray hina rehefa hitaky ny zony. Ny firaisan-kinan’ny vehivavy malagasy no nahafahana niala tamin’ny kitay telo an-dalana, ary tafiditra tamin’ny zara mira noho ny adintsika vehivavy malagasy, ny ray aman-drenintsika, ny zokintsika sy isika izao no nahatonga izany. Mbola noho ny tolona nataontsika vehivavy malagasy ihany koa nahafahana 57, 58 taona taorian’ny nahazoana fahaleovantena vao afaka manana izany hoe, mampita ny zom-pirenena amin’ny zanany ny vehivavy malagasy fa talohan’izay tsy afaka manao an’izany. Noho isika, ny firaisankinantsika no nahatonga izany. Mbola betsaka ny ady sy ny tolona atao ho an’ny zon’ny vehivavy”, hoy ny minisitry ny Mponina.
Tsy hijerena loko politika ny tolona
Tsy mijanona hatreo anefa fa mbola betsaka ny ady ataon’ny vehivavy hitakiana ny zony, indrindra amin’ny herisetra mihatra amin’ny vehivavy. Ny andron’ny 8 martsa no fotoana hitakiana izany, satria io no andro hiadiana ho an’ny zon’ny vehivavy. “Mbola betsaka ny herisetra mihatra amin’ny vehivavy amin’izao fotoana izao. Ny 30 isan-jaton’ny vehivavy mbola hiharan’ny herisetra isan-karazany, ao amin’ny tokantrano, any amin’ny sehatra rehetra izay misy azy any. Amin’izao isika miteny izao, ny vehivavy malagasy 10 isan’andro no mbola maty eo ampiterahana noho ny tsy fahazoana fitsaboana araka ny tokony ho izy rehefa mitondra vohoka. Mbola betsaka ny rahavavintsika misedra olana eo amin’ny asa. Tsy mitovy ny karaman’ny lehilahy sy ny vehivavy eto madagasikara nefa mitovy ny asa atao, ny karaman’ny lehilahy ambonibony kokoa”, hoy hatrany ny fanamarihan’ny minisitra ny Mponina. Noho izany mila miady ho an’ny zony ny vehivavy tsirairay. Ny ady atao tsy hijerena loko politika fa ady atao amin’ny mba hisitrahan’ny vehivavy ny zony, ka mba ho 50 isan-jaton’ny fitantanana eto Madagasikara, dia ho an’ny vehivavy amin’ny taona 2030. “Mila miady amin’izany isika. Ny tolona ho an’ny vehivavy tahaka izao tsy hijerena loko politika, tsy hijerena firehana, tsy hijerena fiaviana fa miray hina isika vehivavy rehefa hiady, hitolona ho an’ny zon’ny vehivavy mba ho tanteraka izany. Ny tanjona amin’ny taona 2030 dia ny 50 isan-jato amin’ny fitantanana sy ny fanatanterahana eto Madagasikara dia an’ny vehivavy”, hoy hatrany ny minisitra Onitiana Realy, tao anatin’ny lahateny mitory firaisankina.